Imibhiyozo emyoli njengeSeychelles ngoku igqithile ngokufika kwabaTyeleli be2020
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » Imibhiyozo emyoli njengeSeychelles ngoku igqithile ngokufika kwabaTyeleli be2020
isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
I-Seychelles ibhiyozela ukufika kweendwendwe
Kulungile kwindlela yokubuyela kwimeko yesiqhelo ukusukela kwisigqibo sokufika kwindawo yokuvulwa kwayo ngo-Matshi 2021, intengiso yeziqithi ze-Indian Ocean yenye into ebalulekileyo njengoko undwendwe lwe-114,859th luye lwangena kwilanga laseSeychelles lisuka kwiQatar Airways ngenqwelomoya iQR 678, ethi ifike nge-7: 40 kusasa ngoMvulo we-11 ku-Okthobha, idlula ngokusesikweni inani elipheleleyo labatyeleli elibhalwe kunyaka we-2020.
Abakhweli kunye nabasebenzi bamkelwe ngabadanisi bendawo kunye nomculo wesintu kwiSeychelles International Airport.
ISebe lezoKhenketho belikhona ukuza kunika izipho zombulelo njengomqondiso wombulelo.
USosiba oyiNtloko kwezoKhenketho uNkosazana Sherin Francis uthe kwisikhululo seenqwelomoya ukuba zonke izigaba zenzelwa umbhiyozo.
Abakhweli abangama-233 kunye nabasebenzi beQR 678 behle kwisikhululo senqwelomoya saseSeychelles ePointe Larue kumbono wabadanisi balapha besenza isandi somculo wesintu nanjengoko indawo ekuyiwa kuyo ibhiyozela enye into ebalulekileyo ekusebenzeni kwayo kwezokhenketho.
Baye bafumana umqondiso wombulelo osuka iSebe lezoKhenketho njengophawu lombulelo ngokuxabisa indawo yesiqithi esincinci.
Kwisikhululo seenqwelomoya ukwamkela iindwendwe kunye nokuphawula le mpumelelo, uNobhala oyiNtloko woKhenketho waseSeychelles, UNkosazana Sherin Francis, uthe:
“Ngenxa yalo nyaka unzima ishishini lezokhenketho elijongene nawo; zonke iziganeko ezibalulekileyo zibhiyozela umbhiyozo. Namhlanje, siphawula le mpumelelo ibalulekileyo ngombulelo. Kwiveki ezimbini ezidlulileyo samkele undwendwe lwethu lwe-100,000th kulo nyaka. Inani le-118, 859 namhlanje linani elibalulekileyo njengoko libonisa ukuba iSeychelles ihlala iyindawo ekhethwayo kubakhenkethi. Eli nani likwayi- ubungqina bokuthanda nokuzimisela komsebenzi owenziwe zii-ofisi zethu kwihlabathi liphela, amaqabane ethu kumzi mveliso kunye nayo yonke iSeychellois encedisa ukuqala kwakhona kwentsika yoqoqosho lwethu. Olu lusuku lokuzingca kwindawo esiya kuyo, njengoko sikwenzile kwiinyanga nje ezili-10 oko besikuthatha njengeyona meko imbi kwisicwangciso sethu sokubuyisela kwimeko yesiqhelo. ”
Isicwangciso-qhinga sokutshintsha okulandelanayo kulandela ukuwa kwecandelo lokhenketho emva kokuqalisa kwe-COVID kubonile ukonyuka okuzinzileyo kwamanani okufika avela eSeychelles aphezulu kwiimarike ezondlayo kubandakanya neRussia, United Arab Emirates (UAE), Israel, Germany, France ne Switzerland.
I-Seychelles ngoku ikuluhlu oluvunyiweyo lokuhamba e-UK kunye nase-Italiya, ukuqala kwakhona kweenqwelomoya yiCondor kunye neAir France kamva kule-Okthobha, ukhenketho lwasekhaya kunye nabahambi ababuka iindwendwe balindele amaxesha angcono ngaphambi kwesiqingatha sexesha lekhefu kunye nexesha lasebusika njenge Iimarike zemveli zabatyeleli eYurophu zikhaba kwiigiya.
Ukudibanisa ukubuyela kwakhona kwezoqoqosho kwinkqubo yokugonya kwilizwe liphela, iinkqubo zempilo yoluntu kunye noqeqesho olukhuselekileyo lwe-COVID kunye nokuqinisekiswa kwamashishini, abezokhenketho kunye nabasebenza ngokubuka iindwendwe, iSeychelles yenye yeendawo zokuqala zokuvula imida ngokupheleleyo kubakhenkethi ngo-Matshi 2021. Isicwangciso-qhinga esihlawulayo ngokucacileyo kwilizwe apho ukhenketho luyintsika ephambili kwezoqoqosho.